Kushandiswa kwemidziyo yemumba. Dzidza kudzora yako magetsi bhiri | Green Renewables
Kana tichinge tatenga chinhu chitsva, tinoda kuti chishande, chirinyore kushandisa uye nekuita mabasa anoenderana nacho nemazvo. Imwe yemabhenefiti ekuvandudza tekinoroji ndeyekuti iyo kunwiwa kwemidziyo yemumba yakaderera nekuda kwekuvandudzwa kwayo mashandiro esimba. Pamwe bhiri remagetsi richazosvika kwatiri uye isu tinoshamiswa nehunhu hwatiri kuona uye imhaka yekuti hatisi kufunga nezvekushandisa kwemimwe midziyo yemagetsi inodya zvakanyanya kupfuura vamwe.
Unoziva here chinoshandiswa nemuchina wekuwachisa kana ceramic hob? Vane mutengo wakaenzana neterevhizheni kana yekuomesa bvudzi? Kana iwe uchida kuziva kuti kushandiswa kwemidziyo yemumba chii uye kuti zvinokanganisa sei bhiri remagetsi, ramba uchirava ichi chinyorwa.
1 Kushandiswa reshiyo yemidziyo yemumba
2 Energy kunyatsogona chitaridzi
3 Chii chinodyiwa firiji uye muchina wekuwachisa?
3.2 Washing machine
Kushandiswa reshiyo yemidziyo yemumba
Zviripachena kuti hazvisi zvese zvemagetsi zvinoda simba rakafanana kuti zvishande. Mamwe ane simba uye mamwe madiki. Mumwe nemumwe ane basa mumba uye, Zvichienderana nekushandisa uye kuwanda kwayo, tichave tichishandisa rakanyanya kana shoma simba. Semuenzaniso, isu tinogona kuve neterevhizheni yakavhurwa kwenguva yakareba kuti iite yekushandisa yakafanana neiyo yekuwachira ndiro yekugezesa zvakakwana. Pakati pemhando yega yega yechigadzirwa tinofanirwa kufunga nezve modhi. Haasi ese ma microwaves kana mafiriji anodya chinhu chimwe chete.
Tekinoroji iri kufambira mberi nekusvetuka nemuganhu nhasi. Iko kushandiswa kwesimba kwemidziyo yega yega kuri kuwedzera zvakanyanya uye izvo zvinogona kutibatsira kuchengetedza pamari yemagetsi. Nekudaro, zvisinei hazvo kuti mudziyo unoshanda zvakadii, kana tisingashandise zvakanaka, iwe unopedzisira uchidya zvakafanana uye uchafanirwa kuribhadhara kubva muhomwe yako.
Sezvo yega modhi uye mhando yechishandiso chakasiyana, isu tine simba rekushandisa simba iro rinotibvumira kuti tizive kushandiswa kwakadzama kwechinhu ichi chiri kutaurwa. Uye zvakare, zvinotibvumidza isu kuziva zvimwe zvakakosha hunhu senge ruzha urwo painenge ichishanda, mvura yainoshandisa (mune yekuwachisa michina, yekuwachira mbichana, nezvimwewo) uye simba rakanyanya rainaro (izvi zvine hukama ne iyo simba remagetsi chibvumirano icho chaive mumba).
Energy kunyatsogona chitaridzi
Iko kushandiswa kweichi chitaridzi seyakakodzera rejisheni yekutenga kwako kana kwete kwakakosha kuitira kuchengetedza simba. Kana tichizotenga mudziyo hatifanirwe kungotarisa pamutengo, asi kuti zvichatipei mune ramangwana. Iwe unofanirwa kufunga kuti izvo zvinoshandiswa nemushandi zvinotipa isu panguva yakapihwa hazvisi sekugadzirisa sezvatichazoshandisa nekushandisa kwayo kwemakore.
Tichapa muenzaniso kuitira kuti zvinzwisiswe zviri nani. Kana tikatenga muchina wekuwachira unokosha mazana matatu emaeuro asi uine A + simba rekushandisa, tinenge tichipedza zvakawanda mukati mehupenyu hwayo hunobatsira pane kana tikatenga muchina wekuwachira unokosha mazana masere euros, asi uyo une A +++ kushanda . Ndokunge, panguva iyoyo tinenge tichishandisa mazana mashanu ema euro pakutenga muchina wekuwachisa. Nekudaro, michina yekuwachisa inogara makore anopfuura gumi. Mumakore gumi kana anopfuura, zvirokwazvo iwo ane A +++ kugona kwakubatsira iwe kudzikamisa uye kunyangwe chengetedza yakawanda pamagetsi ekushandisa.
A priori, patinoenda kunotenga mudziyo, tinotarisa chete pamuenzaniso nemutengo. Zano iri Iko kufunga nezve chishandiso chiri kutaurwa uye mashandisiro uye nguva inofungidzirwa yekuti ivo vachatishandira. Ceramic hob, terevhizheni, microwave, michina yemagetsi inogara kwemakore mazhinji uye yakakodzera kutarisa kuti inoshanda sei. Zvikasadaro, isu tichawana kushamisika kana tichiverenga mutengo wemagetsi bhiri.
Tichaongorora kudyiwa kwezvinhu zviviri zvakakosha zvemumba mumba.
Chii chinodyiwa firiji uye muchina wekuwachisa?
Aya ndiwo majaira maviri asingakwanise kushayikwa mumba. Izvo chinhu chakakosha uye dzinofanirwa kushandiswa hongu kana hongu. Iyo firiji inofanira kugara ichishanda uye haina kana mabhureki. Kune rimwe divi, muchina wekuwacha unomhanya paavhareji pakati pe2 ne4 nguva pasvondo, zvinoenderana nenhamba yevanhu vanogara mumusha uye nemararamiro avo. Naizvozvo, iwo maviri midziyo yemagetsi iri kuenda kunoshandisa chakakosha kunwiwa kumba uye izvo zvinoratidzwa mune bhiri.
Iyo firiji pachayo haipedze simba rakawanda. Haisi chimwe chinhu chinoda simba rakawanda kutonhora chikafu. Zvisinei, chinoita kuti kushandiswa kwayo kuve kwakakwirira ndechekuti inogara yakabatana. Ichi ndicho chikonzero nei firiji inotora zvakapotsa 20% yesimba rekushandisa kwesimba. Ichi chikonzero chakaringana zvekuti, kana tichitenga firiji, tiri kuongorora iro rekushandisa simba nemipendero nezviratidzo. Sarudza iwo mafiriji ayo ivo vanongodya 170-190 KWh pagore. Izvi zvinongodudzira kune makumi maviri nemakumi matatu emadhora pagore.
Kana izvi zvikaongororwa, mhedzisiro inosvika yekuti, kana firiji yakakosha zvakanyanya nekuti inoshanda zvakanyanya, mukufamba kwenguva inozobatsira nekuti mashandisiro ayo anenge ave mashoma.
Zvino ngatipfuurire mberi kune iyo kesi yemuchina wekuwachisa. Kuti uzive kuwanda kwemuchina wekuwachisa, zvinhu zvinoverengeka zvinofanirwa kutarisirwa. Hatifanire kungotarisa chete chiyero chesimba remagetsi, asi zvakare funga nezvenguva yekugezwa kwatinenge tichiita kakawanda uye tembiricha yatinoisa mvura.
Hazvina kufanana kugeza mumatunhu marefu uye nemvura inopisa pane kushandisa macircuit emaminetsi makumi maviri nemvura inotonhora. Kushandiswa kuri kukwirisa pamatanho maviri. Chero zvazvingaitika, iro simba reruzhinji ruchazotipa chiratidzo chakanakisa chekushandisa zvakanyanya uye isu tinongofanirwa kuita math. Chokwadi icho zvakakodzera kusarudza kubhadhara zvishoma kutengwa kwemuchina wekuwacha asi wozochengeta pane bhiri yemakore anouya.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona zvirinani kuziva kuti ndezvipi zvinhu zvekufunga nezvazvo kuchengetedza pamagetsi bhiri uye kudzidza zvakawanda pamusoro pekushandisa kwemidziyo yakakosha kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Kushandiswa kwemidziyo yemumba
Ndiani akawana magetsi?